Radio Don Bosco - Tantara
Naseho ny : 8 jolay 2020
Nihatra tamin'i Dera ary tsaroany hoe : "any am-poto-tsofina ny aina". Fa io vatana io : raha tsy mahazo ny sakafo sahaza azy isan'andro dia malemy tsy afa- manao na inona na inona.
I Vola II 
Naseho ny : 7 jolay 2020
Natrehan'i Dera ihany koa izany hoe raim-pianakaviana irery ao an-trano : tsy tao avokoa ny vady aman-janany sy ny mpanampy roa fa samy nanana adidy hotanterahana avokoa. Ary ny an'i Dera dia ny miandry trano sy ny mikarakara ny tenany no tsy maintsy atrehany. Teo no nahatsapany fa tsy mandehandeha ho azy amin'izao ny fiainana : mifoha, misakafo, miasa, matory. Dia toy izany hatrany.
Naseho ny : 4 jolay 2020
Tsy vitan'ny fitaizana zaza ao an-tokantrano ihany fa ny fitaizana azy hatrany am-piangonana, dia nirotsahan'i Dera an-tsehatra mandrakariva. Ary dia nahita sy nahatsapa tokoa, fa tsy zavatra mora akory ny adidy amin'ny fananan-janaka : manomboka amin'ny fitondrana azy any am-bohoka, amin'ny fiterahana, amin'ny fitaizana sy fanabeazana azy.
Naseho ny : 3 jolay 2020
Nandraman'i Dera natao avokoa izay fanaon'ny renim-pianakaviana amin'ny zazakely, kanefa mandrakariva dia tsy mba ataon'ny raim-pianakaviana. Nisedra olana hatrany nefa izy teo am-panatanterahana izany, saingy tsy kivy fa niatrika lalandava.
Pejy 8 amin'ny 66